Miss Universe (Myanmar) coming to Las Vegas! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Myanmar Gazette » Miss Universe (Myanmar) coming to Las Vegas!	4
Miss Universe (Myanmar) coming to Las Vegas!
Posted by kai on Nov 25, 2015 in Myanmar Gazette, News |4comments
May Brani Taw
ယခုလတွေ့ဆုံခြင်းကဏ္ဍမှာအမေရိကနိုင်ငံ Las Vegas မြို့မှာ ဒီဇင်ဘာ၂၀ရက်နေ့ ကျင်းပမယ့် နိုင်ငံတကာMiss Universe ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူ Miss Universe Myanmar 2015 မေဘရဏီသော် နဲ့အင်တာဗျုးထားပါတယ်။ သူမဟာ နိုဝင်ဘာ၂၈ရက်နေ့မှာ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ကနေ Qatar Airways ဖြင့်ထွက်ခွာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီနှစ်က Las Vegas မှာဆိုတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယားက မြန်မာတွေသွားရလွယ်ပါတယ်။ အားပေးကြဖို့ပါ။ လက်မှတ်ကုန်သွားတတ်တာမို့ ကြိုတင်ဝယ်ယူထားကြဖို့တိုက်တွန်းပါကြောင်း..။
♣ ညီမရဲ့ ဇာတိနဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း။ (မိဘ၊ အထက်တန်းကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်၊ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်။)
ညီမက ရန်ကုန်ကပါ.မိဘ ကတော့ဦးလှမြင့်၊ဒေါ်ဝင်းဝင်းကျင်ပါ.ကျောင်းကိုအထက၂ ဗဟန်းကနေ10တန်းအောင်ပြီး ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကနေ BA(History)နဲ့ပြီးခဲ့ပါတယ်.လက်ရှိကတော့Miss Universe Myanmarအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး လက်လှမ်းမှီတဲ့အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်နေပါတယ်
♣ ခန္ဓာကိုယ် အတိုင်း၊ အလေးချိန်။
၃၄,၂၄,၃၆ ၁၀၇ ပေါင်
♣ Miss Universe Myanmar ၀င်ရွေးခံဖို့ ဘယ်လိုအဆက်အသွယ်ရပြီး ၀င်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
MUMပြိုင်ပွဲကို 2015မှာပြိုင်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်.MUM လျှောက်လွာတင်မဲ့ရက်ကိုအမြဲသတင်းစာကကောfbကပါစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်.
♣ လက်ရွေးစင်ရွေးချယ်ဖို့ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြပါဦး။
2013မှာ Miss People, 2014 မှာMiss international ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်.နှစ်ခုလုံး1st runner upရခဲ့ပါတယ်
♣ အားကျနမူနာယူတဲ့ မယ်တွေက ဘယ်သူတွေများဖြစ်မလဲ။
မမိုးစက်ဝိုင်ပါ.2013 modelစလုပ်ချိန်မှာ ပွဲတစ်ခုကmodelအနေနဲ့ခေါ်ချိန်မှာ မမိုးစက်ကို ပွဲမှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်.အရမ်းကို အားကျခဲ့မိပါတယ်
♣ Miss Universe Myanmar နိုင်ငံကိုယ်စားပြုတဲ့မယ်တယောက်ရဲ့ အရည်အသွေးတွေက ဘာလို့ ညီမထင်လဲ။
အဓိက ကတော့ယုံကြည်မှုပါ.စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်ရပါမယ်။ Body, Beauty, Brain နဲ့ Behavior လဲပါရပါမယ်.
♣ တတ်ကျွမ်းတဲ့ဘာသာစကားပေါင်း။ အလည်ရောက်ဖူးတဲ့နိုင်ငံတွေက။
Englishပါ။ နိုင်ငံပေါင်း ၅ နိုင်ငံကိုရောက်ဖူးပါတယ်
♣ အားကစားလုပ်ချိန်တနေ့ကို ဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားလဲ။
♣ Miss Universe ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ ၀တ်စုံဒီဇိုင်နာတွေ ဘယ်သူတွေကို အပ်ထားသလဲ။
National costume & Evening Gown က ဒီဇိုင်နာမင်းသက်စံ(Sweet&Smart) မြန်မာဝတ်စုံ ဒီဇိုင်နာ ငြိမ်းကို(Chic&chic )၊ Casual wear ဒီဇိုင်နာ ရွှန်းလဲ့ပိုင်
♣ ဘ၀မှာ စံထားတဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေက။
ဖေဖေ မေမေ နဲ့ ငယ်ငယ်က ဆရာကြီးပါ.
♣ ဘ၀မှာလက်ကိုင်ထားတဲ့ ဆောင်ပုဒ်က။
♣ ရုပ်ရှင်နဲ့ကြော်ငြာသရုပ်ဆောင်ရိုက်ဖို့ရော စိတ်ကူးရှိပါလား။
ဝါသနာမပါ ပါဘူး.ဒါပေမဲ့ စမ်းကြည့်ချင်ပါတယ်
♣ နှစ်သက်တဲ့ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်တွေက။
Pop အမျိုးစားကိုကြိုက်ပါတယ် Angelina Jolie ကိုကြိုက်ပါတယ်
♣ ညီမကိုအားပေးမယ့် ယူအက်စ်ကပရိသတ်ကို ပြောချင်တာရှိရင် မြန်မာ့ဂဇက်က နေပြောပေးပါဦး။
ညီမ ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာအနေနဲ့ဝင်ပြိုင်မှာပါ.ဘယ်နေရာကိုရောက်ရောက်မြန်မာအလှအပ ဆိုတာကို ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး.ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာ အလှဟာမြန်မာ မှာပဲရှိလို့ပါ.ညီမအကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်သွားမှာပါရှင်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: 4B ပြည့်စုံတဲ့ သဘောပေါ့။
Wow says: ဟို NLD အလံ ဒီဇိုင်းဝတ်ထားတဲ့ ခေးမလေးက ပိုချောတယ်
Ko Two says: ဒဗလူ အို ဒဗလူခင်ဗျား
အောင် မိုးသူ says: မြန်မာပြည်က Pageant Fan တွေက သူ့ကို သဘောမကျကြဘူး။ မျက်လုံးသေနေတာရယ်။ ပြိုင်ပွဲတုန်းက သူ့ထက် အရယ်အပြုံးတောက်ပပြီး အစစအရာရာ သာတဲ့ နှစ်ယောက်က မရသွားတာလည်းပါတယ်။